Ahoana no hampihenana ny metabolisma?
Olona maro no nanapa-kevitra ny hampihena ny metabolisma ao amin'ny vatana. Matetika dia ilaina izany rehefa mila mihena ianao, fa indraindray dia ilaina amin'ny aretina sasany (ohatra, amin'ny fanitsakitsahana ny asan'ny tiroidan'ny tiroida). Fomba iray na iray hafa, ny olana amin'ny metabolisma miadana dia mila manatona amin'ny fomba lavorary, manova ny fomba fiainana ary manala aretina, fa misy ihany koa fomba samihafa izay manampy amin'ny fanovana ny metabolism.
Ahoana no ahafahanao manatsara ny fatran'ny sakafo amin'ny sakafo?
Ny metabolism dia mifandray mivantana amin'ny sakafo sy hormones. Saingy raha toa ka tsy afaka manitsy foana ny farany dia manova ny sakafo amin'ny herintsika.
Ny vokatra manatsara ny metabolismy:
Zavamanitra. Fantatra fa ny lovia aroso miaraka amin'ny menaka, manatsara ny metabolisma amin'ny 25%. Izany dia noho ny capsaicin, izay misy ao anatin'izany betsaka. Io vatana io ihany koa no misakana ny fisian'ny endrika maloto, araka ny voalazan'ireo mpahay siansa avy ao amin'ny Nottingham University. Faniry iray hafa, izay mamafa ny metabolism - cinnamon. Ny fiantraikany amin'ny metabolism dia isaina amin'ny 10%, ka raha ampiana dipoavatra sy kanelina amin'ny lovia rehetra, dia hampiroborobo ny metabolism. Ny zava-mahadomelina sy ny curry dia ilaina ihany koa amin'ny fikotranana.
Bokatra. Mba hampihenana ny metabolismy, tsara ny manomboka ny sakafo maraina miaraka amin'ny citrus: hanampy ny asan'ny tsinay, ary koa hanamafy ny vatana amin'ny vitamina. Ny voankazo hafa dia manana vokatra mahasoa amin'ny metabolism, fa tsy toy ny citron, orange, mandarin na grapefruit.
Hazo vokarin'ny vokatra. Noho ny habetsaky ny kalcioma, ny vokatra tahaka ny kefir, ny tsaramaso fandroana, ny ronono ary ny tsiro dia mamafa ny metabolisma.
Hena voatsabo. Ny proteinina dia ampahany manan-danja amin'ny metabolismika, mba tsy hikorontana, ny sakafo dia tokony hahitana henan'alika na henan'omby.
Voanjo. Manana tavy matsaka maromaro izy ireo - rohy tsy azo ampiasaina amin'ny metabolism. Ampy hohanina 100 g hazelita, almonds, cashews (mba hisafidy) mba hampihena ny fizotran'ny metabolika.
Ny fihinana izay manatsara ny metabolisma
Ny fitsipika fototra momba ny fihinanana fanafody ny metabolista - dia matetika, fa amin'ny kely vidy. Ny taratasy mivalona mahasalama dia tokony hiasa tsy tapaka: ka rehefa avy misakafo maraina aorian'ny ora iray dia afaka mihinana poma ianao, ary aorian'ny roa rehefa hihinana voanjo, aorian'ny fotoana kely haka tsimoka tsaramaso. Io fihinanana io dia manampy amin'ny fihinanana sakafo tsara, ary koa ny fampihenana ny metabolism amin'ny alàlan'ny fitohizan'ny tazo marefo.
Ny zava-mahadomelina izay mampitombo ny metabolista
Raha tanjona ny hampihena ny fatran'ny metabolisma dia ny fahaverezan'ny fahavoazana, ny fampiasana fanafody dia tena tsy tiana: ny zava-misy dia misy fiantraikany amin'ny vatany, ary raha ny marina, dia mahomby, nefa miaraka ihany koa ny voka-dratsiny.
Medication izay manatsara ny metabolismy:
Strumel T dia zava-mahadomelina omeopatika izay aseho amin'ny olona manana hypothyroidism.
L-thyroxine dia zava-mahadomelina hormonina izay omena an'ireo izay manana T4 ambany. Ny rafitra endocrine dia mifandray akaiky amin'ny pitipika sy ny hypothalamus, izay mifehy ny habetsan'ny hormones ny tiroida novokarina, izay vokatr'izany ny fiovan'ny metabolism. Raha misy hormonina be dia be, dia mihamitombo ny metabolisma, ka ny L-thyroxine dia hanampy amin'ny fihenam-bidy, fa mety hampihena ny vanim-potoanan'ny ratra (estrogen sy progesterone), ary mampianatra ihany koa ny fihanaky ny tiroida amin'ny tsy fahavitrihana (midika izany fa mila maka mihoatra ny herintaona ny fanafody).
Vitaminina izay mampitombo ny metabolista
Ny vitamina toy ny: D, B6, ary C dia manatsara ny fizotran'ny metabolika, fa ny habetsahany mihoatra ny maharatsy ny fahasalamana. Ny tsara indrindra dia ny hampivoatra ny metabolisma amin'ny vokatra, satria Misy vitamina voajanahary.
Fandaniana fanampiny izay mampiakatra ny metabolista
Ny fisotroana samihafa dia afaka manatsara ny fizotry ny metabolika, mba hahafahan'izy ireo ho tafiditra ao amin'ny sakafo isan'andro.
Decoctions. Misy ny herisetra izay mampitombo ny metabolisma: rameva, seleria, dandelion, balom-boasary, lozam-pifamoivoizana - izy ireo dia mety ho levona fa tsy dite na kafe.
Kafe sy dite. Ny kafe voajanahary dia manara-maso ny metabolisma, fa tsy miteraka tachycardia, tsara ny misotro azy mihoatra ny 1 kaopy isan'andro. Ankoatra izany, ny fiakaran'ny fatran'ny metabolismana dia miteraka dite maitso amin'ny jasmine - misy vokany mahatsiravina sy misy kafeine.
Toaka. Ny zava-pisotro misy alika ihany no mamindra ny metabolisma. Na izany aza, natao ao anaty dite (tsy mety ho an'ireo te hanala lanja) ary mety hiteraka fiankinan-doha, ka tsy tokony ampiasaina amin'ny tanjona ara-pitsaboana: betsaka loatra ireo fomba mahasoa manodidina ny metabolism mba handefasana labiera.
Fampitomboan'ny tiroida - soritr'aretina sy fitsaboana
Autoimmune Thyroiditis avy amin'ny tohin'ny tiroida
Ny neocolon intercostal - fitsaboana any an-trano
Caripazim avy amin'ny hernia
Ny glomerulonephritis malemy
Fety any Etiopia
Sary ao anaty aterineto
Ahoana ny fomba hanadiovana ny akora?
Anarana fampakaram-bady isan-taona
Inona no tsara kokoa - tantara an-kira na trano fisainana an-trano?
Sakafo ho an'ny saka Felix
Alan Rickman sy Emma Thompson
Famoronana efitrano misy varavarankely
Ny "fanevatevana" mahatsikaiky indrindra amin'ireo marika amin'ny vidiny ao amin'ny fivarotana